The Voice Of Somaliland: Puntland oo ku gacan seyrtay in ay qaab qabiil uga qeyb gasho kulanka uu ku baaqay C/laahi Yuusuf
Puntland oo ku gacan seyrtay in ay qaab qabiil uga qeyb gasho kulanka uu ku baaqay C/laahi Yuusuf
Mas'uuliyiinta maamul beeleedka Puntland ayaa shaaca ka qaaday in aaney qaab qabiil uga qeyb geli doonin shir ay kooxda Mbagathi sheegtay in bisha April lagu qaban doono magaalada Muqdisho.
Xassan Daahir Afqurac oo ah mas'uulka labaad ee ugu sareeya maamul beeleedka Puntland ayaa saxaafadda u sheegay in aaney marnaba qaab qabiil ku tageyn shirka uu ku baaqay Cabdullaahi Yuusuf, balse ay uga qeyb geli doonaan qaab maamul goboleed.
Hadalka kasoo yeeray mas'uuliyiinta maamul beeleedka Puntland ayaa kahor imaanaya rabitaanka Cabdullaahi Yuusuf ee ku aadan in qabaa'ilka Soomaalida leysugu keeno laguna heshiisiiyo magaalada Muqdisho.
Ninka ugu sareeyay maamul beeleedka Puntland Cadde Muuse Xirsi ayaa todobaadkii hore saxaafadda u sheegay in aaney jirin wax qabaa'il ah oo isku dirirsan Soomaaliya, balse waxa leysku hayo ay tahay mabda' iyo siyaasad, sidaa daraadeedna aaney habooneyn in la yiraahdo qabaa'il baa la heshiisiinayaa.
Guurtida dhaqanka ee Beesha Muqdisho ayaa dhankooda todobaadkii lasoo dhaafay sheegay in aaney jirin qabaa'il is dirirsan, isla markaana aan loo baahneyn kulanka la sheegay in bisha April lagu heshiisiinayo qabaa'ilka Soomaalida.
"Cabdullaahi Yuusuf wuu yaqaan ciddii xabaddii ugu dambeysay kusoo ridday ee hala heshiiyo nimankaas iyaga ah" ayuu saxaafadda ku yiri madaxa guurtida beesha Muqdisho.Damaca dagaal ooge Cabdullaahi Yuusuf ugu jiro in uu meel isugu keeno beelo aan dirirsaneyn ayey dad badan u fasirteen in ujeedada shirkan uu ku baaqay Cabdullaahi Yuusuf tahay in la abuuro colaad sokeeye oo ka dhex qaraxda beelaha walaalaha ah ee Soomaaliyeed.
Mar haddii beelaha koofurta iyo beelaha Puntland diideen ka qeyb galka kulanka, beesha waqooyi galbeedna Cabdullaahi u aragto in uu yahay nin waalan, lama garan karo cidda ka qeyb geli doonta kulanka uu dagaal ooge Cabdullaahi Yuusuf ku doonayo in uu isaga horkeeno beelaha Soomaaliyeed.
Posted by Ahmed Quick Ahmed Quick at Sunday, March 11, 2007